I-Spring yithuba lokuzikholisa ngezihlangu ezintsha. Namhlanje kwii-shelf zeentengiso unokufumana iibhothi ukusuka kwizinto eziphathekayo. Isikhumba, izambatho, abathinteliyo abalingisa izinto ezihlukeneyo, kwaye ngokuqinisekileyo i-suede, ngokungathandabuzekiyo eyintandokazi kuloluhlu. Ingakumbi le ngcaciso ifanelekile kwiibhotile zentwasahlobo. Omnye uye waba ngumtshatsheli we-suede, ekwazisa lonke ubuhle bezinto eziphathekayo, ngelixa abanye bengathandabuzeki ngokuthembeka nokusebenza kwayo xa ukhetha izicathulo. Namhlanje, kuya kuba malunga nokuba ukhethe ukuthatha izicathulo, indlela yokukhetha i-suit suede boots.
Akunabo bonke abafazi abagqibayo ukwenza ukhetho kunye neenzuzo zezibhantshi ze-suede zasebusika. Emva kwakho konke, ukuphakama kwezinto eziphathekayo kuluhlu kakhulu kwiimeko zobusika bethu. Ukuthutha, ukungcola kunye netyuwa yileta akuyona into ehle kakhulu yokuhlobisa iibhotile.
Kodwa ngexesha lempuma, xa izitrato zingenamanzi kwaye zingcolileyo ixesha eligqibeleleyo lokuqonda iingubo zokugqoka iimilenze zakho.
Ukuqinisekiswa kumaphephancwadi amafashini kunye nemigca yendlela. Kwimilinganiselo yanamhlanje ye-fashion-suede-inombolo ye-1. Izizathu zokubaluleka kwezi zinto zemvelo zininzi. Kukhululekile kwaye kuyimfashini, ngaphandle kokukhethwa kwimibala yeembatho ezivela kwi-suede kuninzi kuneemveliso ezivela ngaphantsi kwayo, isikhumba.
I-Suede - le nto iguqulwa ngaphakathi ngaphakathi kwesikhumba, kunye nokubizwa nge-fatty brunning. Le ncwadana yenziwa ngezimvu, iimbombo kunye neebhokhwe zeebhokhwe. Siyabulela unyango olukhethekileyo, uncedo olukhulu kwiiparitha ezinjenge-flexibility and elasticity. Oku kwenza izicathulo ezenziwe nge-suede kungekuyo kuphela kumnandi kumgca, kodwa zikhululekile ukugqoka. Ngokukodwa inokuthi ivezwe ngabasetyhini abanokuguqulwa kweenyawo, ukukhupha amathambo.
I-palette ayigcini kwimimandla emnyama emnyama. Amashishini e-Boutique kunye namaphepha ekhathalogi anika bobabini abamnyama, abacebile abamnyama abathandi beklasiks, kunye neendwangu ezicacileyo eziza kuba yi-accent engenakuphikiswa emfanekisweni weefesistas ezigqithisileyo.
Kwimodeli yezicathulo ezivela kwi-suede, unokufumana izinto ezifana neengqungquthela ezifana nokuqhawula, ukulungiswa ngoboya, zonke iintlobo zokukhawuleza kunye nezikhwenkcozo, eziqhaqhazelayo okanye ezenziwe ngetoni, ukuhlobisa ngeentsimbi, izicelo kunye nokunye okuninzi. Ungakhankanyi i-fringe, epheleleyo kwi-suede ukusebenza.
Inyaniso yokuba i-suede ayingabangani kunye nemvula yinyaniso. Yintoni engenakutshoyo ngokufudumala okufudumeleyo nokuba kushushu. Yingakho, i-suede yinto efanelekileyo yeebhotshi zasehlobo. Iingqayi ezivela kuyo zingagqalwa kwiinyawo ezingenanto. Ngombulelo kwiipropati zeegusha zezimvu, iinyawo zihlala zomile, zicoceke kwaye zivumba, ukujikelezwa komoya kunikwa ngaphakathi kwesihlangu. Olu khetho olugqibeleleyo xa uhamba kakhulu.
Ngendlela, i-suede, inketho efanelekileyo kubanikazi beenyawo ezide. Kwiiboot boots, umlenze ukhangeleka kakhulu, ubuhle. Kanye nalo mbandela ugxininisa ubuhle nesithunzi senyawo lesibini.
Unokukhetha njani abini?
Ukuthenga iibhola ze-suede, kufuneka ubeke ingqalelo kwi-front of the shoes. Ngoko, i-suede ye-high-quality ephezulu inombala ofanayo, kunye nentlawulo, ayiyiyo inqwaba. Kwiphepha lezinto ezifanelekileyo, akufuneki kubekho umtshato, okanye indawo. I-Paint akufanele ishiye amanqaku ezandleni. Kanye kunye ne-suede villi, engabonisa ukuba oku kuphazamiseka, okuqinisekileyo, kuya kuphazamisa umgangatho xa uphele. Kukulungele ukuziva izinto eziphathekayo zeebhotile.
Ubume bezinto eziphathekayo bunokufumaneka lula ngephunga. Izicathulo ze-Suede zihlala zilula, ngoko, ungathengi imodeli oyithandayo "kunye nomgama" kwi-sock, okanye ubukhulu obukhulu. Ukuba iibhothi zinezixhobo, qwalasela ngokuphindaphindiweyo ngamaxesha amaninzi kwaye ngokukhululekile ukuba ingaba ziboshwe. Nangona kunjalo, nangokuba ufanelekile ukuba ube nethuba lokuthandana nezihlangu ze-suede, kunye nentuthuzelo enika kwimilenze yakho. Ngoku uyazi indlela yokukhetha i-suit suede boots!
Iqhwa elikhanyayo: khetha izicathulo ezinokuzilungelelanisa nezesitayela nge-Econika
Iibhotshi ngesitayela sase-American cowboys
Yintoni enxiba iibhotile zerabha?
Isaladi yeTuna ikhutshwe
I-Verryas Yonyaka Omtsha "Kwi-Snow Maiden"
Iingcebiso zokupheka kwi-aerogril
Ngokubaluleka Kwemvakalelo kuPhuhliso loMntwana
USergei Lazarev wayemthanda i-parody yenani lakhe elidumileyo
Mojito eneemon et sprite
Indlela yokumisela ngesandla, ngaluphi umda umntu afe: Izifundo ze-Chiromancy
Ubhado lwe-Mustard ngokulahleka kwesisindo
Ingulube ibhaka ngeqhekeza lesicebo
Indlela yokupheka ngokukhawuleza isaladi yangaphambili kunye nenkukhu, kunye neembotyi: zokupheka kunye neefoto